နှင်းဟေမာ: May 2010
ဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒ မှ ၂၈-၅-၂၀၁၀ တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ ရင်သွေးငယ်လေးများကို ယဉ်ကျေးလိမ္မာကလေးတရားပွဲအဖြစ် ဟောကြား ချီးမြှင့်တော်မူမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယဉ်ကျေးလိမ္မာကလေးတရားပွဲကို Morning Session အနေဖြင့် စင်္ကာပူစံတော်ချိန်နံနက် ၉ နာရီတိတိမှ ၁၂ နာရီတိတိအချိန်ထိ အသက် (၁၂)နှစ်အောက် ကလေးငယ်လေးများအတွက် ဟောကြားချီးမြှင့်၍ Evening Session အနေဖြင့် နေ့လည် ၁နာရီတိတိအချိ်န်မှ ညနေ ၄နာရီတိတိ အချိန်အထိ အသက် (၁၂)နှစ်မှ အသက် (၁၈)ထိကလေးငယ်လေးများကို ဟောကြား ချီးမြှင့်တော်မူမည် ဖြစ်ပါသည်။
တရားပွဲကျင်းပမည့်နေရာမှာ - Informatics Jurong Campus No,(10). Science Centre Road,
Singapore 609079 (Near Jurong East MRT) ဖြစ်ပြီး ၊ တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့ မိဘများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရင်သွေးငယ်လေးများကို ယဉ်ကျေးလိမ္မာကလေးတရားပွဲသို့ ပို့ဆောင်ပေးလိုပါက mcchild.dhammatalk@gmail.com နှင့် eschild.dhammatalk@gmail.com သို့
အောင်ဖော်ပြပါ ပုံစံအတိုင်း ၂၅-၅-၂၀၁၀ အင်္ဂါနေ့တွင် နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြပါကြောင်း ၀မ်းမြောက်ဖွယ် သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Registration Form Sample :
Name _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Age _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gender _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Education _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parent _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Address _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Phone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
email _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ကြပါသည်။
ကိုဇင်မင်းယု - +65 9004 9227 ၊ 8117 2324
ကိုသောင်းထိုက် - +65 8160 8064
တရားတော်ကို ရိုသေစွာ နာယူကြမည့် ကလေးငယ်လေးများ၏ အုပ်ထိမ်းသူ မိဘများလည်း မိမိတို့၏ ရင်သွေးငယ်များနှင့် တကူတကွ တရားနာယူနိုင်ကြပါသည် ဆိုသည့်အကြောင်းလည်း ၀မ်းမြောက်ဖွယ် ထပ်မံသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးအတွက် အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်သော ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ ( Vesak Day )အခါ သမယမှာ -
“ကလေး ကလေး အထင်မသေးနဲ့ ၊ ကလေးက လူကြီးဖြစ်တာ .....
ကလေးကောင်းမှ လူကြီးကောင်းမှာ ၊ လူကြီးကောင်းမှ အားလုံးကောင်းမှာ .... ”
ဆိုတဲ့ ရွှေဥမင် ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ လင်္ကာလေးအတိုင်း မိမိတို့ရဲ့ ကလေးငယ်လေးများ ပြည်ပမှာ နေထိုင်ကြီးပြင်းကြရပေမယ့် ဘာသာရေး အသိစိတ်ဓါတ်မြင့်မားတိုးတက်လာအောင် သွင်သင်ဆုံးမလျှက်ရှိတော်မူသော ဆရာတော်ဘုရား၏ ယဉ်ကျေးလိမ္မာအထူးတရားပွဲသို့ တတ်ရောက်နာယူနိုင်ကြပြီး အသိအလိမ္မာ ၊ ဥာဏ်ပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်လာကြစေရန် အလို့ငှါ နိဗ္ဗာန်ကို အကျိုးမျှော်လျှက် ... ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ဤသတင်းကို ပေးပို့သော www.dhammadownload.com မှ Admin အားအထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မေတ္တာစိတ်ဓါတ် တရားမြတ်ဖြင့် လွှမ်းပတ်ကမ္ဘာတည်ကြပါစေ...
22 May 2010 ( 1:55 pm )
Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 1:56 PM2comments
Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 2:37 AM7comments
ကျမအနေနဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲစိတ်ဝင်တစား လေ့လာလိုက်စားဖြစ်ပေမယ့် ပြန်ပြီး မမျှဝေဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ လတ်တလောကျမရဲ့ဖုန်းလေးကို Jailbreak လုပ်ဖြစ်တော့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတော်တော်များများကပါ စိတ်ဝင်စားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်...။ ဒါ့ကြောင့်မို့ စိတ်ဝင်စားသူတွေ အားလုံးအတွက် နည်းပညာတစ်ခုအနေနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်...။
Spirit ဆိုတာကတော့အခုလပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ Jailbreak လုပ်တဲ့ software အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ Blackra1nနဲ့ Jailbreak လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့Firmware3.1.3ထွက်လာတဲ့အခါမေ့ပြီးတော့update လုပ်မိလိုက်တာအရင်လုပ်ထားသမျှ Jailbreak လေးတွေအားလုံး ကုန်ပါလေရော...း( အဲလိုနဲ့ပဲ ဘယ်သူများ 3.1.3 အတွက် Jailbreaksoftware ထပ်ထုတ်မလဲလို့
မျှော်လိုက်ရတာ တော်တော်လေး လည်ပင်းရှည်သွားပါတယ်....း) အခုတော့ မျှော်ရကြိုးနပ်ပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမလိုပဲ MCModelFirmware3.1.3 သမားတွေအတွက် Jailbreak အပြင် untetheredJailbreak (ဖုန်းrestart လုပ်ရင်recoverymode သို့အလိုအလျှောက်ရောက်သွားခြင်း) အတွက်ပါအဆင်ပြေတဲ့software တစ်ခုထွက်လာပါတယ်...။ ဒါပေမဲ့carrierunlock တော့မဖြစ်ဖူးလို့တော့ရေးထားပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် untetheredJailbreak ကိုပြေလည်သွားတဲ့အတွက် phonerestart ဖြစ်တိုင်း Jailbreak ပြန်လုပ်ရတဲ့ဒုက္ခကတော့ ကင်းဝေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ jailbreak လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းကိုသုံးဖူးသူအတွက်
non jailbreak ဖုန်းသုံးရတာ ဆားမပါတဲ့ဟင်းစားနေရသလိုပါပဲ။ သုံးဖူးသူတွေအားလုံးလည်းသိကြမှာပါ။
Jailbreak ပြုလုပ်ခြင်းရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိုတော့အများသူငါလည်းရေးပြီးဖြစ်လို့ကျမအနေနဲ့ ထပ်မရေးတော့ပါဘူး။ Spiritနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့မူရင်းဆိုဒ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
•Spirit is an untethered jailbreak for iPad, iPhone, and iPod touch on the latest firmwares.
•Spirit is notacarrier unlock.
•If you currently are usingatethered jailbreak, you have to restore to use Spirit. Do not upgrade if you use an unlock on an iPhone 3G or 3GS. (You can, however, restore to 3.1.2 if you have SHSH blobs for that version.)
•Any version of iTunes9(including 9.1.1).
•Syncing with iTunes before trying this is highly recommended.
Install ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း အဆင်ပြေစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာပဲလုပ်လုပ်၊မလုပ်ခင်မှာမိမိရဲ့ဖုန်းကို itunesမှာ Backupလုပ်ဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်...။သို့မှသာအရေးအကြောင်းတခုခုလွဲမှားခဲ့သည်ရှိသော်ပြန်လည်restore ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာSpirit Jailbreak software ကို ဒီနေရာ မှာဒေါင်းလုပ်ယူပြီး Desktop ပေါ်မှာ save ပါ။
ပြီးလျှင်Desktopပေါ်တွင်သိမ်းထားသော Spirit application ကို Double click နှိပ်ပြီး run ပါ။
*မှတ်ချက်:Windows7သမားများအတွက်သတိပြုစရာအချက်ကတော့Spiritsoftwareရဲ့compatibility modeကိုWindows98 ကိုပြောင်းထားပေးပြီးမှာသာRunရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့iPhoneကိုcomputer နဲ့ချိတ်ပြီး Spirit software ကသင်၏ iPhoneကိုသိသွားသောအချိန်တွင်
ထို့နောက်တွင်Jailbreak ပြုလုပ်ခြင်းအောင်မြင်စွာပြီးစီးကြောင်း အောက်ပါအတိုင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ထို့နောက်တွင်သင်၏ iPhone မှာ reboot လုပ်ပြီးအောက်ပါအတိုင်း indicator လေးပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
ထိုသို့ပေါ်လာပြီး restart လုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် သင်၏iPhoneသည် Cydia installလုပ်ပြီးသားJailbreak iPhone ဖြစ်လို့သွားပါပြီ။
ကျမရဲ့ဖုန်း (3GS,Firmware3.1.3, Baseband Modern Firmware 05.12.01 )မှာတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဖုန်းတွေလည်း အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျမအနေနဲ့ နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်မျှဝေလိုခြင်းကြောင့် ကြိုးစားပြီးရေးသားထာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အားနည်းချက်တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါသော် ကျမ နှင်းဟေမာ၏ လိုအပ်ချက်နဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုသာဖြစ်ပါတယ်ဟု ၀န်ခံရင်း ...။
Please do it on your own risk. I will not be responsible for any damage or breakage of your iPhone.
Credit to ; http://spiritjb.com, www.iclarified.com
( 11 May 2010 )
Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 10:34 AM6comments
စင်္ကာပူကျွန်းမှာ မင်္ဂလာရှိတဲ့ ဆမ်ဘာဝမ်း ( 2010 ) အတာသင်္ကြန် ၂
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ၊ စင်္ကာပူမြို့ ၊ ဓမ္မဥယျာဉ် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအနီးရှိ ဆမ်ဘာဝမ်းကမ်းခြေ တွင် (၁၁-၀၄-၂၀၁၀)ရက်နေ့က ကျင်းပအောင်မြင်ခဲ့သော မြန့်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် အနုပညာဝါသနာရှင် မောင်နှမတစ်စုတို့က ကြီးမှူးလျှက် ကပြဖျော်ဖြေခဲ့သော အစီအစဉ်များနှင့် သုရာပြဇာတ်အား ဒုတိယပိုင်းအနေဖြင့် ဆက်လက်ဖော်ပြ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည် ။
၀ရုဏရသေ့အဖြစ် - ကိုကိုလေး နှင့် သုရာမုဆိုးအဖြစ် - ကိုအောင်ပြည့်
ဤသုရာပြဇာတ်ကို ကျမ နှင်းဟေမာ မှ ဇာတ်ညွှန်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး - သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် စင်္ကာပူနှင်းဆီအဖွဲ့ မှ ကိုတက်လူ ၊ ကိုဘကျော် ၊ ကိုအောင်ပြည့် ၊ ကိုဂျက်လန် ၊ ကိုကိုလေး နှင့် ကိုနေလင်း တို့မှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ် ...။ ဆမ်ဘာဝမ်းဆရာတော်ဘုရားအနေနဲ့ ပြည်ပမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ရွှေမြန်မာမျိုးဆက်သစ် လူငယ် လေးတွေအတွက် သေရည်သေရက်သောက်သုံးခြင်းကြောင့် ရရိ်ှလာမယ့် အကျိုးအပြစ် အချက်အလက်တွေကို သိရှိနားလည်စေရန် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လမ်းညွှန်မှုပေးခဲ့ပေးပြီး ဇာတ်ညွှန်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာအောင် တိုက်တွန်းခဲ့ပေမယ့် ... ကျမ ဘက်က အားနည်းချက်တွေအများကြီးနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေရှိသွားခဲ့ပါတယ် ...။
ဆမ်ဘာဝမ်းသင်္ကြန်ပွဲကို ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်မရလိုက်သူများနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့်အညီအောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးမြောက်ခဲ့သော ဆမ်ဘာဝမ်းသင်္ကြန်၂၀၁၀အတာသင်္ကြန်အောင်ပွဲ အပိုင်း(၂) ကို ဆက်လက်စောင့်စားနေကြသော ကျမ ရဲ့မောင်နှမများအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ....။
ဆရာ စိန်မြင့်စန်း (တက်လူ) ကိုယ်တိုင် ရေးစပ်သီကုံးထားတဲ့ “လမြတ်နှစ်ဦး”ဆိုတဲ့တေးသီချင်းလေးဖြစ်ပြီး - ကိုဘကျော် ၊ ကိုညီညီ ၊ မခက်ခက်ဇော် နဲ့ မနီလာတို့က သီဆိုထားပါတယ် ....။ ဒီသီချင်းလေးက ရိုးရာအတာသင်္ကြန်အဖွင့်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီလှသလို ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိလှတဲ့ ဆမ်ဘာဝမ်းသင်္ကြန်ပွဲရဲ့ နံနက်ခင်းနဲ့အတူ လိုက်ဖက်ပနံရလှတယ်လို့ ကျမ သုံးသပ်မိပါတယ် ...။
သုရာပြဇာတ် အပိုင်း (၁)
သုရာပြဇာတ် အပိုင်း (၂)
သုရာပြဇာတ် အပိုင်း (၃)
သုရာပြဇာတ် အပိုင်း (၄)
သုရာပြဇာတ် အပိုင်း (၅)
ကိုဂျက်လန်နှင့် မသဇင်ကြည်တို့၏ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ရွှေအိုးစည်အက
ပြဇာတ်အပြီးမှာတော့ ကျမ နှင်းဟေမာနဲ့အတူ ကျမတို့ သုရာပြဇာတ်အဖွဲ့သူ ၊ အဖွဲ့သားများ အားလုံးက မင်္ဂလာရိ်ှတဲ့ မင်္ဂလာ ... တေးသီချင်းကို သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ် ...။
စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့သော အတာသင်္ကြန်ပွဲတွင် ပျော်ရွှင်စွာ လာရောက်ဆင်နွှဲကြသော ဆမ်ဘာဝမ်း မိသားစု၏ ဧည့်ပရိတ်သတ်များ ........
ပွဲလည်းကြည့်ရင်း ... စတုဒီသာတွေလဲ စားကြရင်း ... ပျော်ရွှင်စွာ ရေလဲကစားကြရင်း ကြည်နူးခဲ့ကြတဲ့နေ့ တစ်နေ့
ရိုးရာသင်္ကြန်သီချင်း ဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု အဆို - ကိုဘကျော် နှင့် အက - မခင်ဖြူကြည်
မရိုးမအီအောင် အိုးစည်အကဖြင့်... တင်ဆက်ခဲ့သော .. အက - ပိုင်ပိုင်ချမ်း နှင့် နန်းမေသဲအေး
မြန်မာသီချင်းဆိုရအောင်တေးသီချင်းဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သော ...
အဆို - မမာမာရီ နှင့် အက - နန်းမေသဲအေး
မြန်မာသီချင်းဆိုရအောင်တေးသီချင်းဖြင့် ကပြခဲ့သော - နန်းမေသဲအေး ၊ ခင်ဖြူကြည် ၊ စန္ဒာတိုး
ဆမ်ဘာဝမ်းသင်္ကြန်ပွဲခင်းအတွင်းမှ လွမ်းစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်စင်ကြီးနဲ့အတူ ... ၂၀၁၀ ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီးကို ညနေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် ၄ နာရီ မိနစ် ၃၀ တိတ်ိအချိန်မှာပဲ အောင်မြင်စွာ ဗျောစည်တီး၍ သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်.....။
မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လှသော ဓလေ့ထုံးနန်းနှင့် အညီ စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာ ဘိုးဘွား မိဘများကို ရိုသေစွာကန်တော့ကြသော မင်္ဂလာရှိသည့် အတာသင်္ကြန် ပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာအောင် ....
တစ်နှစ်တာ ပင်ပမ်းနွမ်းနယ်ခဲ့ကြသော ပြည်ပရောက် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်မောင်မယ်များကို ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ပျော်ရွှင်ခွင့်ရအောင် .... ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲကြီး အခုလို ဖြစ်မြောက်လာအောင် အဘက်ဘက်မှ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုတော်မူသော အသက်သွင်းဖန်တီးပေးခဲ့သော ဆမ်ဘာဝမ်းဆရာတော်ဘုရား ဦးအိန္ဒာစရိယ နှင့် ဆမ်ဘာဝမ်းကျောင်းမှ ဆရာတော်ဘုရားများ ၊ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင်များ ၊ အဓိက စပွန်စာများ ၊ စတုဒီသာ အလှူရှင်များ ၊ အနုပညာဝါသနာရှင်မောင်နှမများ နဲ့ မိမိတို့တတ်စွမ်းသလောက် ကာယ၊ ဥာဏ လုပ်အားများဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ကြသော မောင်နှမများ ၊ လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြသော ဆမ်ဘာဝမ်းမိသားစုပရိသတ်များ အားလုံးကို အထူးပင်လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဒီနေရာလေးကနေပဲ ပြောကြားရင်း နောင်လာမယ့် နှစ်တွေ မှာလည်း အဆန်းတစ်ကာ့ အဆန်းပြားဆုံးထဲက အရိုးရှင်းဆုံး ဖြင့် ဆမ်ဘာဝမ်း မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ပွဲကြီးကို ဒီထက်မက ခြိမ့်ခြိမ့်သဲအောင် ကျင်းပသွားနိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်......
ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရများထဲမှာ သတ်ိတရဖြစ်စေဖို့ မှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်...။
(3April 2010 )
Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 10:35 PM6comments